Raw Pterostilbene Powder (537-42-8) Vagadziri - Phcoker
Pterostilbene powder is antioxidant iyo inonyanya kuwanikwa mumablueberries, mizambiringa uye heartwood yered sandalwood. Pterostilbene …….
Raw Pterostilbene powder (537-42-8) video
Raw Pterostilbene powder ye naturally-yakagadzirwa stilbenoid yakarongeka ne resveratrol, ine simba rinogona kupikisa antioxidant, anti-inflammatory, pro-apoptotic, antineoplastic uye cytoprotective mabasa. Pamusoro pehutungamiri, Raw Pterostilbene powder inoshandisa basa rayo rinopisa-oxidant kuburikidza nekuputsa maitiro eoksijeni anogadzirisa (ROS), nokudaro kudzivirira kushungurudzika kweiyo oxyidative uye ROS-yakaita sero rinoparadza. Inogonawo kuita kuti nyukliya inokonzerwa ne-2-yakabatana nechokuita 2 (Nrf2) -gadziriswa nzira uye inowedzera kutaura kwemarudzi akasiyana-siyana e-antioxidant enzymes, akadai sa superoxide dismutase (SOD). Mukuwedzera, Raw Pterostilbene powder inokwanisa kudzivisa kupisa nekuderedza kutaura kwevamwe vapikisi vanopesana, zvakadai se interleukin (IL) 1beta, tumor necrosis factor alpha (TNF-a), inducible nitric oxide synthase (iNOS), cyclooxygenases (COX) , uye nyukireya factor kappa B (NF-kB). Inodzivisawo kana kudzivirira kushandiswa kwemaitiro akawanda ekucherechedza maitiro anobatanidzwa mucarcinogenesis, uye inowedzera kutaura kwezvipembenene zvakasiyana-siyana zvinopesana nejeni apo kuderera kwekutaura kwechimwe chirwere chinokurudzira majeni. Inobatanidzawo zvakananga apoptosis mumarara masero.
Raw Pterostilbene powder (537-42-8) Specifications
Product Name Raw Pterostilbene powder
Kemikari Name Raw Pterostilbene powder;
Molecular Wsere 256.301 g / mol
Misa chaiye 256.11 g / mol
APane Stilbenoid yakasikwa-chaiyo yakagadzikana yakabatana ne resveratrol
Raw Pterostilbene powder (537-42-8) Tsanangudzo
Pterostilbene is a methylated stilbene molecule ine chimiro chakafanana ne resveratrol, mutsauko chete uri maviri ma methoxy mapoka pane pterostilbene molecule iyo inotsiva mapoka ehydroxy pane resveratrol molecule. Kunyange zviito zvevaviri izvi zvichifananidzwa, pterostilbene inoita kunge yakanyatso nyudzwa zvichitevera kumedza kwemuromo uye inogona kunge iine simba re antioxidant uye anticancer mamorekuru.
Chidzidzo chimwe chete chakaongorora pterostilbene powder muvanhu. Yakawana kuwedzera kweLDL-cholesterol uye maitiro kune yakaderera HDL mazinga mune vanhu vane yakakwira cholesterol mazinga avo vakatora 100 kana 250 mg pazuva. Zvakanga zvisina kujeka kana iro rezasi dose rakatungamira kudzikiswa kweropa, asi kuderedzwa kweboka rakatora iro rakakwirira dhizaini kwaive nesimba.
Pterostilbene powder (537-42-8) Mechanism of Action
Pterostilbene kurwisana nehutachiona hwekushushikana nekubatanidza kubatanidza antioxidant enzymes. Inowedzera superoxide dismutase 1 (SOD1) uye peroxiredoxin-4 (PRDX4), iyo inosungirirwa kumagadzirirwo eoksijeni akasiyana. Vatsvakurudzi vakaona izvi zvichiitika mumasero eziso revanhu, zvichiratidza kuti pterostilbene inogona kudzivirira kubva kune zvinokonzera kukanganisa. Kunze, Pterostilbene inoshandisawo SIRT1 nzira yekucherechedza iyo inodzivirira kusangana kwemasero. Iyi nzira inowedzera kutaura kweP53, puroteni inodzivirira DNA uye inodzivirira kuchinja kunogona kutungamirira kenza.
Kunyange zvazvo SIRT1 inogona kudzivirira pane zvimwe zvekuderera uye kukuvadza kunoitika patinokura. Zvisinei, pterostilbene haisi mapiritsi emashiripiti pakurwara.
Ongororo dzakawanda dzakaratidza kuti pterostilbene inoderedza kuputika kunoenderana nekenza necrosis factor-alpha (TNF-alpha). Kuora mwoyo kunokonzera kupisa; pterostilbene inogona kuvhiringidza TNF-alpha uye interleukin-1b (IL-1b) nekuderedza kushandiswa kweiyo oxygen marudzi.
Pterostilbene inodzivirirawo kushungurudzika mukati memagetsi emagetsi anonzi endoplasmic reticulum, kana ER. Mune rumwe ruzivo, apo masero kubva pamakumbo emidziyo yeropa akaiswa pachena pterostilbene, ER wavo haana kugamuchira zviratidzo zvekuvhiringidza, uye havana kupera.
Pterostilbene ine huwandu hwakakura hweanogona kurwisa kenza nzira. Inogona kuchengetedza maseru ane hutano uye nekukuvadza maseru ane cancer. Mune glioma (uropi kana gomarara remuzongoza) masero, pterostilbene yakadzikira Bcl-2 uye yakawedzera Bax; shanduko idzi dzinowedzera maseru "kuzviuraya" maseru uye dzinokonzeresa kuti maglioma maseru afe.
Pterostilbene inoratidzika kuti inosarudzira nzvimbo inonzi hippocampus muuropi. Ikoko, inowedzera huropi-yakagadzirirwa neurotrophic factor (BDNF), mitogen-activated protein kinases (MAPK), uye mhinduro yeCAMP inosunga mapuroteni (CREB). Aya mapuroteni matatu anobatsira neuroni kukura, kuwedzera, uye kupindura kune zvakapoteredza. SNRI zvinodzvinyirira zvinowanzotarisa nzira idzi zvakare. Uyewo mumukoko, pterostilbene inowedzera puroteni inonzi Nrf2, iyo inowedzerawo kutaura kwe antioxidant mapuroteni.
Iko monoamine oxidases, MAOs, iine enzymes inoparadza maurotransmitter muuropi. Chimwe chezvinokonzerwa nemakemikari, MAO-B, kusarudza kusarura dopamine; semugumisiro, zvinodhaka zvinodzivisa MAO-B kuwedzera dopamine muuropi. Maererano neakawanikwa munguva pfupi yapfuura, pterostilbene inhibits MAO-B basa uye, nokudaro, inowedzera inowanika dopamine.
Pterostilbene powder inogona kudzivirira chirwere cheAlzheimer nekuchengetedza uropi kubva kune beta-amyloid (Aβ). Nzira chaiyo haina kuzivikanwa, asi inoratidzika kusanganisira PI3K uye Akt, mapurotini maviri anotsigira chiyeuchidzo, kudzidza, uye neuron kukura.
shandisa yePterostilbene powder (537-42-8)
Yakakurudzirwa Pterostilbene powder (537-42-8) Dosage
Mune vanhu, mahara kusvika ku 250 mg pazuva anonzi akachengeteka. Mizinga yakakwirira yakadai seyiyi yakaratidzwa kuderedza kushanda kweropa uye kukurudzira kuora kwekurema. LDL cholesterol yakakura zvakanyanya zvakare, asi izvi zvakakanganiswa zvachose nekuwedzerwa kwechibereko chemazambiringa.
Mune mhuka, maitiro akawanda ezasi akave ane njere dzinonzwisisika. Pakati pe1 uye 2 mg pamakilogiramu ekurema kwezuva nezuva kunoderedza kushungurudzika mumakonzo. Kushandisa chimiro chakafanana-chiyero chakaenzana pakati pemakonzo nevanhu, chiyero chekutanga (mumug) kune munhu chichati uremu hwavo mu kg yakakamurwa ne12.3. Izvozvo zvinoshanda kune:
4.6 mg / zuva re 125 lb munhu
5.5 mg / zuva re 150 lb munhu
6.5 mg / zuva re 175 lb munhu
7.3 mg / zuva re 200 lb munhu
Kana iwe uri kutora pterostilbene powder nokuda kwekubatsira kwaanoziva, iwe unogona kuda kutanga nehana yakaderera zvikuru. Zvisinei, zviitiko izvi zvakaderera zvakangoti zvave zvichengetwa mumakonzo kusvika ikozvino, uye vanhu vanogona kunyatsonakidzwa nekugutsikana kwepamusoro pamitambo yakakwirira.
Kubatsira kwePterostilbene powder (537-42-8)
Pterostilbene powder is antioxidant iyo inonyanya kuvapo, inewo chemopreventive, antiinfigueatory, antidiabetic, antidyslipidemic, antiatherosclerotic uye neuroprotective mhedzisiro. Kunze kweizvozvo, zvakare ine zvimwe zvakanaka sezviri pazasi:
Inobatsira kurwisana nekenza
Inovandudza cognition uye inodzivirira kero yekufa muuropi
Inoderedza ropa Sugar
May Sotsigira Kurasikirwa Kwemafuro
May Dai Kuwedzera Maitiro